မူးရစ်ဆေးဝါးများက ဦးနှောက်ကို ဘယ်လို အလုပ်လုပ်ပေးသလဲ? – Gentleman Magazine
မူးရစ်ဆေးဝါးများက ဦးနှောက်ကို ဘယ်လို အလုပ်လုပ်ပေးသလဲ?
နည်းနည်းလေး သုံးလိုက်တာနဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ရောင်စုံ ဖြစ်သွားတယ်။ သံစဉ်တွေ အားလုံး သာယာလှပလာတယ်။ နည်းနည်းလေး သောက်လိုက်တာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ကြွက်သားတွေ ဂျယ်လီလို ပျော့ပြောင်းပြီး အနားရသွားတယ်။
ကွဲပါးခြားနားတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ကွဲပြား ခြားနားတဲ့ အမြင်တွေနဲ့ ကြည့်မိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ Aftereffect တွေကတော့ သုံးနေတုန်း ရတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ လားလားမှ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။
အဲဒိတော့ ထူးခြားတဲ့ ခံစားချက်တွေရအောင် အဲဒိ ဆေးဝါးတွေက ဦးနှောက်ကို ဘာတွေ လုပ်ကြသလဲ??
ဆေးခြောက်မှာပါဝင်တဲ့ အဓိက ဓာတ်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ THC ဟာ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို Dopamine ဟော်မုန်းထွက်ဖို့ လှုံ့ဆော်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ ပျော်တဲ့အရာတွေ၊ ဥပမာ အစားကောင်းစားခြင်းနဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့မှာ ထွက်တဲ့ ဟော်မုန်းပါ။
၂. Magic Mushrooms
လေ့လာမှုတွေမှာ Mushroom တွေမှာ အဓိကပါတဲ့ ပစ္စည်း Psilocybin ဟာ ဦးနှောက်ရဲ့ ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုကို ရပ်တန့်စေပြီး ဦးနှောက်ရဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ နေရာတွေကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပေးပါတယ်။ အဲဒိ ဆက်သွယ်မှုတွေဟာ အသုံးပြုသူကို အရောင်တွေမြင်ရတာ၊ အသံတွေကြားရတာ၊ စိတ်ဖိစီးမှု လျော့နည်းစေတာတို့ကို ပေးစွမ်းပါတယ်။
အရက်ဟာ ဦးနှောက်ထဲမှာပါတဲ့ Neurotransmitter တွေရဲ့ level ကို ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ အဲဒိအရာတွေက ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျောက်လုံး စီးဆင်းနေတဲ့ အတွေးအခေါ် အမူအရာတွေကို ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ အရာတွေပါ။ အရက်ဟာ တွေးခေါ်တာ၊ အသက်ရှုတာ၊ နှလုံးခုန်တာတွေကို နှေးကွေးသွားစေခြင်းမှာ အဲဒိ တက်ကြွတဲ့ messenger ဆဲလ်တွေကို ထိန်းချုပ်ပြီး နှေးကွေးတဲ့ ဆဲလ်တွေကို လွှတ်ပေးလိုက်လို့ပါ။ Dopamine လယ်ဗယ်လဲ တက်စေပါတယ်။
ဦးနှောက်ဟာ Heroin ကို Morphine အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ Morphine ဟာ ဦးနှောက်ရဲ့ နာကျင်မှု ခံစားရတဲ့ နေရာတွေကို ဖိနှိပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဆေးအများကြီးထိုးသွင်းလိုက်ရင် ထုံကျဉ်လာတာပါ။ အဲဒါဟာ ဦးနှောက်ရဲ့ ပင်မနေရာမှာရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကိုပါ နှေးကွေးစေတာကြောင့် အရမ်းများသွားရင် အသက်ရှုရပ်စေပြီး သေဆုံးစေပါတယ်။
၅. Prescription opiate painkillers
OxyContin နဲ့ Vicodin လိုမျိုး အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေကို အလွဲသုံးမှုဟာ Heroin အလွဲသုံးသူတွေထက် အဆ ၄၀ ပိုပါတယ်။ အဲဒိဆေးဝါးနှစ်ခုဟာ ဦးနှောက်ထဲမှာ လုပ်ဆောင်ပုံက တူတူပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် အလွယ်ရတဲ့ ဆေးတွေကို ပိုသုံးလာကြတာ ဖြစ်မှာပါ။
Caffeine ဓာတ်ဟာ စိတ်ခွန်အားကို တခဏ တိုးစေပါတယ်။ Adrenaline ဟော်မုန်း ပိုထွက်စေလို့ လေ့ကျင့်ခမ်လုပ်လို့ ပိုကောင်းပေမယ့် စိတ်ဆတ်တာတွေလဲ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဦးနှောက်ထဲမှာတော့ ညဘက်မှာ လူကို အိပ်ပျော်စေတဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို တားဆီးထားပါတယ်။
LSD ဟာ Magic Mushrooms တွေလိုပဲ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေပါ။ အဲဒိအရာတွေဟာ ဦးနှောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ အတွေး၊ လက်ခံနိုင်မှုတွေကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပြောင်းလဲပစ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဦးနှောက်အပိုင်းတွေကိုလဲ ပြောင်းလဲပစ်ပါတယ်။ ကာလတို Effect တွေကတော့ စိတ်အပြောင်းအလဲ မြန်တာ၊ ထုံကျဉ်တာ၊ ဝမ်းနည်းလာတာ၊ ခေါင်းမူးတာ၊ နှလုံးခုန် မြန်တာတို့ပါ။
Flakka ဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးအသစ်ဖြစ်လို့ ဦးနှောက်ကို ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာ သေချာ မသိရသေးပါဘူး။ Cocaine နဲ့ Amphetamines တွေနဲ့ တူတယ်လို့ပဲ မှန်းဆထားကြပါတယ်။ Dopamine နဲ့ လူကိုတက်ကြွစေတဲ့ဟော်မုန်း norepinephrine ထုတ်လွှတ်မှု များလာစေတာပါ။
နာမည်ကြီး ဆေးပြားတွေကတော့ ဦးနှောက်ထဲက Dopamine, norephinephrine နဲ့ စိတ်ခံစားမှု ထိန်းချုပ်ဟော်မုန်း Serotonin တို့ ထုတ်လွှတ်ပေးတာပါ။ အဲဒ် Ecstasy ဟာ ဦးနှောက် ကို ပျက်စီးစေမှုနဲ့ လူသိများပါတယ်။ မှတ်ဉာဏ်နဲ့ အသိဉာဏ်ပညာတို့ကို ပျက်စီးစေတာပါ။
ရှုသွင်းတာ၊ ထိုးသွင်းတာ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် Cocaine သွေးလမ်းကြောင်းထဲ ရောက်သွားရင် ခဏလေးအတွင်း Dopamine အမြန်အဆန် ထုတ်လွှတ်မှုကြောင့် မိုးပေါ်ပျံနေရသလို ခံစားမှုမျိုး ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ ပြင်းထန်စွဲလမ်းလွန်းလို့ Cocaine စွဲသူတွေဟာ ဆေးရှိနေရင် အာဟာရပြတ်ပြီး သေသည်အထိ အစားမစားပဲ ဆေးကိုပဲ သုံးနေမိမှာပါ။ ဦးနှောက်ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်နေရာ တချို့ကို နှိုးဆွပေးလို့ အဲဒိဟာကို စွဲလမ်းခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာရတာပါ။ သုံးလေ စွဲလေ၊ စွဲလေ သုံးလေ သံသရာလည်စေပါတယ်။
နညျးနညျးလေး သုံးလိုကျတာနဲ့ ကမ်ဘာကွီးဟာ ရောငျစုံ ဖွဈသှားတယျ။ သံစဉျတှေ အားလုံး သာယာလှပလာတယျ။ နညျးနညျးလေး သောကျလိုကျတာနဲ့ ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံး ကွှကျသားတှေ ဂယျြလီလို ပြော့ပွောငျးပွီး အနားရသှားတယျ။
ကှဲပါးခွားနားတဲ့ မူးယဈဆေးဝါးတှဟော ကမ်ဘာကွီးကို ကှဲပွား ခွားနားတဲ့ အမွငျတှနေဲ့ ကွညျ့မိအောငျ ဆောငျရှကျပေးပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ Aftereffect တှကေတော့ သုံးနတေုနျး ရတဲ့ ခံစားခကျြတှနေဲ့ လားလားမှ မသကျဆိုငျပါဘူး။
အဲဒိတော့ ထူးခွားတဲ့ ခံစားခကျြတှရေအောငျ အဲဒိ ဆေးဝါးတှကေ ဦးနှောကျကို ဘာတှေ လုပျကွသလဲ??
ဆေးခွောကျမှာပါဝငျတဲ့ အဓိက ဓာတျပစ်စညျးဖွဈတဲ့ THC ဟာ ဦးနှောကျဆဲလျတှကေို Dopamine ဟျောမုနျးထှကျဖို့ လှုံ့ဆျောပါတယျ။ အဲဒါဟာ ကြှနျတျောတို့ ပြျောတဲ့အရာတှေ၊ ဥပမာ အစားကောငျးစားခွငျးနဲ့ လိငျဆကျဆံခွငျးတို့မှာ ထှကျတဲ့ ဟျောမုနျးပါ။
လလေ့ာမှုတှမှော Mushroom တှမှော အဓိကပါတဲ့ ပစ်စညျး Psilocybin ဟာ ဦးနှောကျရဲ့ ပုံမှနျလှုပျရှားမှုကို ရပျတနျ့စပွေီး ဦးနှောကျရဲ့ ကှဲပွားခွားနားတဲ့ နရောတှကေို တိုကျရိုကျ ဆကျသှယျပေးပါတယျ။ အဲဒိ ဆကျသှယျမှုတှဟော အသုံးပွုသူကို အရောငျတှမွေငျရတာ၊ အသံတှကွေားရတာ၊ စိတျဖိစီးမှု လြော့နညျးစတောတို့ကို ပေးစှမျးပါတယျ။
အရကျဟာ ဦးနှောကျထဲမှာပါတဲ့ Neurotransmitter တှရေဲ့ level ကို ပွောငျးလဲပေးပါတယျ။ အဲဒိအရာတှကေ ခန်ဓာကိုယျတဈလြောကျလုံး စီးဆငျးနတေဲ့ အတှေးအချေါ အမူအရာတှကေို ထိနျးခြုပျပေးတဲ့ အရာတှပေါ။ အရကျဟာ တှေးချေါတာ၊ အသကျရှုတာ၊ နှလုံးခုနျတာတှကေို နှေးကှေးသှားစခွေငျးမှာ အဲဒိ တကျကွှတဲ့ messenger ဆဲလျတှကေို ထိနျးခြုပျပွီး နှေးကှေးတဲ့ ဆဲလျတှကေို လှတျပေးလိုကျလို့ပါ။ Dopamine လယျဗယျလဲ တကျစပေါတယျ။
ဦးနှောကျဟာ Heroin ကို Morphine အဖွဈ ပွောငျးလဲလိုကျပါတယျ။ Morphine ဟာ ဦးနှောကျရဲ့ နာကငျြမှု ခံစားရတဲ့ နရောတှကေို ဖိနှိပျထားနိုငျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ဆေးအမြားကွီးထိုးသှငျးလိုကျရငျ ထုံကဉျြလာတာပါ။ အဲဒါဟာ ဦးနှောကျရဲ့ ပငျမနရောမှာရှိတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ထိနျးခြုပျထားတဲ့ အစိတျအပိုငျးကိုပါ နှေးကှေးစတောကွောငျ့ အရမျးမြားသှားရငျ အသကျရှုရပျစပွေီး သဆေုံးစပေါတယျ။
OxyContin နဲ့ Vicodin လိုမြိုး အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှကေို အလှဲသုံးမှုဟာ Heroin အလှဲသုံးသူတှထေကျ အဆ ၄၀ ပိုပါတယျ။ အဲဒိဆေးဝါးနှဈခုဟာ ဦးနှောကျထဲမှာ လုပျဆောငျပုံက တူတူပါပဲ။ အဲဒါကွောငျ့ အလှယျရတဲ့ ဆေးတှကေို ပိုသုံးလာကွတာ ဖွဈမှာပါ။
Caffeine ဓာတျဟာ စိတျခှနျအားကို တခဏ တိုးစပေါတယျ။ Adrenaline ဟျောမုနျး ပိုထှကျစလေို့ လကေ့ငျြ့ခမျလုပျလို့ ပိုကောငျးပမေယျ့ စိတျဆတျတာတှလေဲ ဖွဈစပေါတယျ။ ဦးနှောကျထဲမှာတော့ ညဘကျမှာ လူကို အိပျပြျောစတေဲ့ ရှုပျထှေးတဲ့ လုပျငနျးစဉျတဈခုကို တားဆီးထားပါတယျ။
LSD ဟာ Magic Mushrooms တှလေိုပဲ ထငျယောငျထငျမှား ဖွဈစတေဲ့ အရာတှပေါ။ အဲဒိအရာတှဟော ဦးနှောကျရဲ့ စိတျဓာတျ၊ အတှေး၊ လကျခံနိုငျမှုတှကေို ထိနျးညှိပေးတဲ့ အစိတျအပိုငျးတှကေို ပွောငျးလဲပဈပါတယျ။ စိတျဖိစီးမှုနဲ့ ဆိုငျတဲ့ ဦးနှောကျအပိုငျးတှကေိုလဲ ပွောငျးလဲပဈပါတယျ။ ကာလတို Effect တှကေတော့ စိတျအပွောငျးအလဲ မွနျတာ၊ ထုံကဉျြတာ၊ ဝမျးနညျးလာတာ၊ ခေါငျးမူးတာ၊ နှလုံးခုနျ မွနျတာတို့ပါ။
Flakka ဟာ မူးယဈဆေးဝါးအသဈဖွဈလို့ ဦးနှောကျကို ဘယျလို အကြိုးသကျရောကျတယျဆိုတာ သခြော မသိရသေးပါဘူး။ Cocaine နဲ့ Amphetamines တှနေဲ့ တူတယျလို့ပဲ မှနျးဆထားကွပါတယျ။ Dopamine နဲ့ လူကိုတကျကွှစတေဲ့ဟျောမုနျး norepinephrine ထုတျလှတျမှု မြားလာစတောပါ။
နာမညျကွီး ဆေးပွားတှကေတော့ ဦးနှောကျထဲက Dopamine, norephinephrine နဲ့ စိတျခံစားမှု ထိနျးခြုပျဟျောမုနျး Serotonin တို့ ထုတျလှတျပေးတာပါ။ အဲဒျ Ecstasy ဟာ ဦးနှောကျ ကို ပကျြစီးစမှေုနဲ့ လူသိမြားပါတယျ။ မှတျဉာဏျနဲ့ အသိဉာဏျပညာတို့ကို ပကျြစီးစတောပါ။
ရှုသှငျးတာ၊ ထိုးသှငျးတာ ဘယျလိုဖွဈဖွဈ Cocaine သှေးလမျးကွောငျးထဲ ရောကျသှားရငျ ခဏလေးအတှငျး Dopamine အမွနျအဆနျ ထုတျလှတျမှုကွောငျ့ မိုးပျေါပြံနရေသလို ခံစားမှုမြိုး ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။ အဲဒါဟာ ပွငျးထနျစှဲလမျးလှနျးလို့ Cocaine စှဲသူတှဟော ဆေးရှိနရေငျ အာဟာရပွတျပွီး သသေညျအထိ အစားမစားပဲ ဆေးကိုပဲ သုံးနမေိမှာပါ။ ဦးနှောကျရဲ့ မှတျဉာဏျနရော တခြို့ကို နှိုးဆှပေးလို့ အဲဒိဟာကို စှဲလမျးခွငျး ဖွဈပျေါလာရတာပါ။ သုံးလေ စှဲလေ၊ စှဲလေ သုံးလေ သံသရာလညျစပေါတယျ။
Previous: ၀န်ထမ်းတိုင်းသိထားရမယ့် အစည်းအဝေး ထုံးစံစည်းကမ်းများ
Next: သူရဲကောင်း Karoly Takacs